Vidim-piainana – 2018: antony iray lehibe ny fiakaran’ny vidin-tsolika | NewsMada
Vidim-piainana – 2018: antony iray lehibe ny fiakaran’ny vidin-tsolika
Par Taratra sur 17/11/2018
Efa nisy fisondrotana hatramin’izay ny vidim-piainana fa izao vao mainka mihalafo izany ho an’ny sarambabem-bahoaka. Mampiova ny fomba fiainana mahazatra eo amin’ny fianakaviana maro, ohatra, ny tsy fahafahana intsony mampiana-janaka sy mitsabo.
Tsy misy mangirana ho an’ny maro anisa ny taona 2018, araka ny fanadihadiana nataon’ny Banky iraisam-pirenena, mifanohitra tanteraka amin’ny zava-misy. Ny tsena, feno zavatra azo vidina fa tsy misy ny hividianana azy. Ireo zavatra ilain’ny mponina andavanandro no tsy zakan’ny fahefa-mividy ny maro intsony, manomboka amin’ny vary foto-tsakafo, 2 000 Ar ny kilao mora indrindra. Efa misy any amin’ny faritra ny mividy maherin’ny 3 000 Ar. 8,6 % ny fisondrotry ny vidim-piainana ankapobeny, raha 8,3 % tamin’ny taon-dasa. Kajy misy singa maro ny hamoahana izany fa hafa ny hitan’ny rehetra.
Tamin’ity taona ity, inenina niakatra ny vidin-tsolika hatramin’izao. 3 380 Ar ny vidin’ny lasantsy tany amin’ny fiandohan’ny taona, vidina 4 150 izao; 3 190 Ar ny gazoala, lasa 3 500 Ar izao. Amin’io vidin’ny ankehitriny io, mbola tsy tratra ny fampiharana ny tena vidiny. Mbola tokony hiakatra 500 Ar izany raha ny kajy navoakan’ny OMH sy ny mpaninjara solika.
Fanazavana efa mahazatra ny fiakaran’ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena sy ny fidinan’ny lanjam-bola Ariary. Tsy sahy nampiakarina io vidin-tsolika io tamin’ity volana novambra ity, noho ny fifidianana. Nisy “fifampiraharahana” mangina angamba. Tsy maintsy mbola hiakatra ihany io ho fampiharana ny tena vidiny.
Io vidin-tsolika io ny antony iray lehibe mampiakatra ny vidim-piainana rehetra, anisan’izany ny fitaterana mitarika fisondrotana hafa. Amin’ireo zavatra fampiasa andavanandro, tsy fantatra ny antony fa isan-kerinandro na 15 andro, misy fiovana ny vidiny. Hita misongadina amin’izany ny sakafo, miantoka ny fahasalamam-bahoaka, toy ny vidin-kena, 12 000 Ar /kg; ny trondro, 15 000 Ar na 16 000 Ar ; ny akondro , 2 000 Ar ; ny arina fandrehitra, 22 000 Ar ny gony, sns. Tsy misy mifanahantsahana amin’ny fidiram-bolan’ny fianakaviana maro.